UMchunu utshele i-ANC eKZN ukuba yesekele uRamaphosa | News24
UMchunu utshele i-ANC eKZN ukuba yesekele uRamaphosa
Johannesburg – Lowo owayenguNdunankulu waKwaZulu-Natal, uSenzo Mchunu, usenxuse amagatsha e-ANC esifundazweni ukuthi asekele uSekela Mengameli uCyril Ramaphosa emkhankasweni wakhe wokuba nguMengameli, wathi kuyakhula ukwesekwa kwakhe ezweni lonke.
“UComrade Cyrli unakho ukwesekwa comrades, ukwesekwa okukhulu, ungavumeli abantu bakwenze isilima. Unokwesekwa kusuka lapha eKZN, unokwesekwa eKZN. Kunoma ngabe ngumbani obuza ukuthi kukuphi ukwesekwa, ngizothi ngingomunye walabo abamesekayo. Asiyeni emagatsheni bese siyameseka,” uMchunu utshele umhlangano weYoung Communist League nokuyilapho ebeyisikhulumi esiqavile khona eSouth Coast eKZN.
OLUNYE UDABA: I-ANC eKZN ifuna athathelwe izinyathelo uRamaphosa
UMchunu uthi ubelokhu embuka nje uMengameli Jacob Zuma echitha indaba yokuthi kuyisiko le-ANC ukuthi uSekela Mengameli abe nguMengameli, wathi lokhu bekulokhu kuqondana kuze kube yimanje.
Uthi lokhu kwenzeka ngesikhathi u-Oliver Tambo – owayenguNobhala Jikelele we-ANC kusukela ngo-1957, akhethwa waba nguSekela Mengameli ngo-1967 ngemuva kokudlula emhlabeni kuka-Albert Luthuli – waba uMengameli obambile futhi ngokuhamba kwesikhathi waba nguMengameli.
“Ngemuva kwalokho kwaba nokunye ukuqondana ngesikhathi uMadiba ayenguMengameli wase uThabo Mbeki waba uMengameli. Kwaba nokunye ukuqondana ngesikhathi yena eba nguMengameli,” kuqhuba uMchunu.
“Bekulokhu kunalokhu kuqondana kusukela ngonyaka ka-1967. Akuphinde futhi kube nalokho kuqondana bese sithi uSekela Mengameli wethu kumele abe nguMengameli bese sikubiza ngokuqondana,” kusho uMchunu maqede kwaba nenhlokomo.